Ka 18, 2018 admin
Unionbank na Philippines ewepụtakarị Bitcoin Ngwuputa ngwá
Bitcoin na-adọta uche nke ego oru. The kasị akụ na Philippines, Unionbank, ahụ wetaara ya Bitcoin Ngwuputa ngwá n'oge a azụmahịa ogbako.
Nke a n'egosi mbụ nnukwu ụlọ akụ n'ihu ọha egwupụta Bitcoin.
India si Infosys mmekọ na anoghi n'ulo oba maka blockchain dabeere ahia ego netwọk
Infosys-ịgagharị blockchain technology mee ka ọhụrụ efficiencies ahia ego.
The blockchain dabeere ahia netwọk a haziri digitize ahia ego azụmahịa Filiks ma na-ekpuchi ebe ndị dị otú dị ka nke onye na nkwado, asambodo nke akwụkwọ na ịkwụ ụgwọ.
na-aga n'ihu, otu Aims ike a “mbara blockchain ilekota, si otú so kwupụta ukwuu doro nke a technology,” kwuru Ajay Gupta, agadi general manager na ICICI Bank.
Tel-Aviv ngwaahịa mgbanwe iji blockchain maka ọhụrụ agbazinye n'elu ikpo okwu
The Tel Aviv Stock Exchange na-teaming na Accenture na The Ft, onye Israel fintech ehiwe, na-ewu a blockchain ala agbazinye n'elu ikpo okwu na-iji na-ekwe ka kpọmkwem agbazinye nke niile ego ngwá.
The ikpo okwu ga-eme ihe dị ka a “onye-nkwụsị-shop niile ala agbazinye eme, ekwe ohere ibu ala mpịakọta n'ime mkpumkpu oge-okpokolo agba, ọbụna na-arụ ọrụ na mkpumkpu-okwu ọnọdụ,” a pịa ntọhapụ na-ekwu,.
N'ihi na launc ...
Mining ngwá emeputa Bitmain akwụ $ 3B afọ ikpeazụ, dị ukwuu dị ka Nvidia
Beijing dabeere Bitmai ...
bitcoinngọngọ yinyemgbanweNgwuputaozin'elu ikpo okwu
Previous Post:Olee otú otu ịkọ omume nke na ọnụego nke a cryptocurrency na okwu nke ọnụ ọgụgụ nke iwu enịm?